ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကြီးထွားဟော်မုန်းများ၏အွန်လိုင်းစတိုး၏ Affiliate Program ကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate Program ကို join ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
- ပထမဦးစွာသင်ကရန်လိုအပ်ပါတယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ နှင့်မိတ်ဖက်အကောင့်ရဖို့
- မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်အထူးကုဒ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရောင်းချပြီးနောက်သင် client ကိုအတူငွေပေးငွေယူမှသင်၏ကော်မရှင်လက်ခံရရှိ
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်မိတ်ဖက်အစီအစဉ်ကို join ဖို့သင့်ပါတယ်?
- အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအတူတကွအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံ Make!
- တိုင်ထင်ကြသလော ယခု Join!